Sina SZR andian-tsarimihetsika mafana manodinkodina firavaka fanamboarana sy orinasa | Fitaovana fanamaivanana Chengxin
SZR andian-tsarimihetsika mafana mihetsiketsika
SZR andian-tsarimihetsika mafana be mihetsiketsika dia ampiasaina indrindra amin'ny fanasokajiana ny menaka sinter antonony sy bitika kely misy hafanana 600-800oc amin'ny indostrian'ny metalurgique, ary hamita ny fizarana fanamiana amin'ny fitaovana fanamafisana.
SZR andian-tsarimihetsika mafana be mihetsiketsika dia ampiasaina indrindra amin'ny fanasokajiana voan-kazo sinter antonony sy kely misy hafanana 600-800oc amin'ny indostrian'ny metalurgique, ary hamita ny fizarana fanamiana amin'ny fitaovana fampangatsiahana. Araka ny fepetra momba ny tranokala miasa, ny motera dia azo apetraka amin'ny ilany havia na havanana; araka ny toerana fametrahana ny motera na ny exciter, ny efijery mafana mihetsiketsika efijery dia azo zaraina ho miakatra hovitrovitra na midina hovitrovitra karazana. Araka ny fitakian'ny mpampiasa dia afaka mamolavola sy manamboatra fanamarihana isan-karazany amin'ny efijery mihetsiketsika voa mafana isika.
Rafitra sy fitsipika miasa:
SZR andian-tsarimihetsika matevina mihetsiketsika dia mipetraka avokoa. Noraisina ny exciter vibration hazo roa, ary tsy mandray anjara amin'ny vibration ny motera. Ny exciter vibration dia entin'ny motera roa ho an'ny fihodinan'ny tena mitovy amin'ny lalana mihodina, hany ka mihetsika tsindraindray ny vatan'ny efijery mankany amin'ny lalana mahitsy, mba hahatratrarana ny tanjon'ny fisavana. Ny takelaka sy ny lovia eo anilan'ny boaty lamba dia vita amin'ny takelaka tsy mahazaka hafanana na lovia vy tsy misy fangarony, ary rivets amin'ny rivets amin'ny alàlan'ny peratra, izay tsy vitan'ny henjana ihany, fa mampihena be ihany koa ny fihenjanana anaty ateraky ny famafana. Ny takelaka sivana amin'ity andiana efijery mineraly mafana ity dia vita amin'ny fitaovana mahazaka hafanana avo lenta sy mahatohitra. Izy io dia manana ny toetran'ny fanoherana ny hafanana tsara, tsy misy fivoarana sy androm-piainana maharitra. Mora ny mametraka sy mandrava ny asany. Ny fitaovana mitoka-monina hovitrovitra faharoa dia raisina amin'ity andiana efijery mineraly mafana ity, izay afaka mampihena be ny herin'ny fiatraikany amin'ny fototra rehefa miasa ny fitaovana, mba hampihenana ny vidin'ny fototra.
masontsivana teknika :
Model Habe famahanana mm Ny fahaizan'ny fitsaboana t / h Herinaratra môtô Kw
SZR-1545 <= 80 150 7.5
SZR-1850 250 11
SZR-2060 300 15
SZR-2575 350 18.5
SZR-3175 400 22
Previous: Efijery zezika andiany HFS
Manaraka: Pikantsary mihetsiketsika ambony sy ambany
Efijery mihodina varimbazaha aluminium
Efijery fanamafisam-peo mihombo vy
Efijeran'ny varimbazaha vy
Szr Hot Ore Vibrating Screen
Crusher marmela andian-tsarimihetsika PCH